अनुहार चम्काउनुस चाहनुहुन्छ ?यदि चाहनुहुन्छ भने घरमै बसी बसी यसरी चम्काउनुस अनुहार यो तरिकाले – Online Palanchok
अनुहार चम्काउनुस चाहनुहुन्छ ?यदि चाहनुहुन्छ भने घरमै बसी बसी यसरी चम्काउनुस अनुहार यो तरिकाले
नोट:- उक्त भिडियो अन्तिमा रहेको छ
खानपीनमा ध्यान नदिँदा धेरैलाई मृगौलामा पत्थरीको समस्याले सताउने गर्छ । मृगौलामा पत्थरी भइसकेको छ अथवा हुने जोखिम छ भने प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउने गर्नाले पत्थरी बन्ने खनिज पदार्थ शरीरबाट पिसावमार्फत जान्छ । आज हामी मृगौलामा भएको पत्थरी हटाउने घरेलु उपायको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन गईरहेका छौँ । घरमा नै पाईने सामाग्री सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने यो समस्याको जोखिमबाट बच्छौँ ।
कागती कागतीको रसमा जैतुनको तेल मिसाएर पिउने र त्यसलगत्तै पानी पिउने गर्नाले साना स्टोन फुटेर पिसाबमार्फत निस्किन्छ । अनारको जुस अनारको जुस पनि किड्नीमा हुने स्टोन हटाउनको लागि लाभदायक मानिन्छ । अनारको जुसमा किड्नी स्टोन हराउने तत्व पाईन्छ । त्यसैले किड्नीमा स्टोन भएकाहरुले दिनमा एक अथवा दुई ग्लास अनारको जुस खाने गर्नु उत्तम हुन्छ ।
राजमा राजमामा फाइबर, वनस्पतिक प्रोटिन, भिटामिन बी र मनरल्स पाइन्छ, जसले पिसाब नलीलाई सफा गर्न र किड्नीलाई सफा गर्न मद्दत गर्छ । साथै यसले किड्नी स्टोन बन्ने र बढ्ने क्रमलाई पनि रोक्छ ।
तुलसी किड्नीलाई स्वस्थ राख्न दिनहुँ तुलसी चिया पिउने गर्नु लाभदायक हुन्छ । एक चम्चा तुलसीको पातको रस र मह एकसाथ पिउनुपर्छ । यसरी लगातार ६ महिनासम्म तुलसीको रस र मह मिसाएर खाँदा पथरी निस्किन्छ । खाना बार्ने चकलेट, चुकन्दर, स्ट्रबेरी, ओखर, मरिच, पालक, कुरिलो जस्ता खानाले स्टोन बढाउने भएकाले यस्तो खाने कुराहरु नखानु उत्तम हुन्छ ।
बेडरूममा काटेको कागती राख्दा हुनेछ अचम्मका फाइदा
एजेन्सी । कागतीले खानेकुरालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्र होइन, यसको स्वच्छ सुगन्धले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ । कागतीमा धेरैथरी एन्टीसेप्टिक र एन्टीब्याक्टेरियल सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । आफ्नो ओच्छ्यानको छेउमा कागतीका टुक्रा राख्दा तपाईंलाई शारीरिक र मानसिक फाइदा हुन्छन् । रातभरि कोठामा कागती राख्दा रुघा र श्वासप्रश्वासको समस्या पनि निको हुन्छ ।
कागतीको टुक्रा अत्यन्त सकारात्मक र पुनर्ताजगी दिने खालको हुन्छ र यसले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ । तनाव र डिप्रेसन छ भने यसले स्ट्रेसको स्तर घटाउँछ र जीवन सहज बनाउँछ ।
राम्रा रेस्टुराँहरूमा कागतीका रुख रोपिएका हुन्छन् जसले ग्राहकलाई आराम दिलाउँछन् । घर स्वच्छ राख्न तपाईं पनि कागतीको सुगन्धयुक्त स्प्रे छर्न सक्नुहुन्छ । छालाका कैयौं समस्यालाई कागतीका टुक्राले निको बनाइदिन्छ । विशेषगरी कुइनो र घुँडो जस्ता खस्रा भागमा कागती दल्दा गजब हुन्छ । कागतीले नङ सेतो बनाउने, सास स्वच्छ राख्ने र गोडा मुलायम बनाउने काम गर्छ । कागतीले बाथ, अपच र गठियाको समस्या पनि समाधान गर्छ ।
यस कारण भुलेर पनि नराख्नुस् विवाहितसँग सम्बन्ध पुरा पढ्नुहोस
आजभोलि विवाहेत्तरका सम्बन्ध सामान्य जस्तै भैसकेका छन् । मानिसहरु बैबाहिक जीवनमा सन्तुष्ट हुँदैनन् र विकल्प खोज्छन् । तर त्यस्ता सम्बन्धले पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा भने धेरै समस्या निम्त्याइरहेका हुन्छन् ।
मनमा अशान्तिः आफै सोच्नुस् यदि तपाइँको श्रीमान वा श्रीमतिले तपाइँलाई धोका दिइरहेको चाल पाउनु भो भने कस्तो अनुभव हुन्छ । गहिरिएर सोंच्नु भो भने तपाइँलाई पनि लाग्छ यो गलत कुरा हो । विवाहितसँगको सम्बन्धमा मनमा शान्ति हुँदैन र सँधै तनाव रहन्छ । यसकारण विवाहितसँग सम्बन्ध नराख्नु
Prevविष्णुले भनिन् , आफ्नै इच्छाले गुमनाम जीवन बिताइरहेकाे छु !!
Nextकालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरी पौष २३ गते सोमबारको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं
राम बाहादुर बमजन आगोमा जलेको प्रतक्ष्य दशीको बयान, सबैको भागाभाग…(हेर्नुहोस् भिडियो)
चीनले आकाशमा बनाएको एक्सप्रेसवे, अद्भुत छ दृश्य !(भिडियो)
कन्सर्टको लागि नेपाल आइडल टप ६ अस्ट्रेलिया प्रस्थान (भिडियो)
अनुहारमा दाग छ ? यी हुन् हटाउने २० तरिका, अनुहारका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छ